Nnyocha e mere kwuru: Oge ejiri nọrọ na Social Media bụ Oge zuru ezu | Martech Zone
Nnyocha na-ekwu, Oge ejiri oge na Social Media bụ Oge zuru oke
Satọde, Ọgọstụ 13, 2011 Sunday, October 4, 2015 Bọọlụ Lorraine
Na mgbe niile ndị nwere obere azụmaahịa na-ajụ anyị ma ọ bụrụ na Social Media bara uru itinye oge. Dabere na nsonaazụ nke anyị 2011 Small Business Social Media Survey azịza nye ajụjụ a bụ EE! Na nyocha a na-esochi, a kọwapụtara obere ụlọ ọrụ dị ka ụlọ ọrụ nwere ndị ọrụ 1-50. Ọ dị mkpa iburu n'uche nyocha a anwaghị ịlele ọnụọgụ nke obere azụmaahịa site na iji mgbasa ozi mmekọrịta, kama ọ bụ otu ndị ọrụ azụmaahịa na-elekọta mmadụ si arụ ọrụ.
A na-eme nyocha a kpamkpam na ntanetị site na Mee 1 - July 1, 2011. Dị ka ị maara, Google Plus malitere na mbubreyo June, ma etinyeghị ya dị ka nhọrọ na ọmụmụ ahụ. E zigara njikọ na nyocha ahụ site na Twitter, Facebook, LinkedIn, na email. E zisakwara ya na www.okirg.biz na www.MachetingTechBlog.com. Anyị natara nzaghachi 243 site na ndị nwe obere azụmaahịa nke ụlọ ọrụ nwere ihe na-erughị ndị ọrụ 50.
Anyị chọrọ ịmata ịghọta ihe ndị obere azụmaahịa na-eche ma na-eme ya na mgbasa ozi mgbasa ozi. Anyị kpebiri ịchọpụta ma ọ bụrụ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya ọ bụ onye nzọpụta nke obere azụmaahịa ma ọ bụ nnukwu igbu oge?
Ihe data yiri ka ọ na-egosi mgbasa ozi mmekọrịta na-enwe mmetụta dị mma n'ọgbọ ndu. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 70% nke ndị nwe ụlọ ahịa gosipụtara na ha na-eduga site na mgbasa ozi mmekọrịta. Mana ọ na-agbakwunye na ala ala?
Ihe kariri ọkara azụmaahịa dị na nchọpụta afọ a gosipụtara mmekọrịta mmadụ na ibe ya ejikọtara ma ọ dịkarịa ala 6% nke ahịa ha, yabụ ịkwụ ụgwọ doro anya ebe ahụ
Dika anyi nyochara ihe ndia, o doro anya na ndi nwe ahia adighi na nkwekorita nke mgbasa ozi. Nke a bụ ihe ndị nwe ụlọ ọrụ gwara anyị mgbe anyị jụrụ ma ọ bụrụ Social Media: Omume azụmahịa siri ike ma ọ bụ igbu oge?
Ọ bụrụ na ịnweghị wowing ndị ahịa gị ma ọ bụ ndị ahịa gị nwere ike iji mgbasa ozi mmekọrịta, asọmpi gị bụ.
Mgbasa mgbasa ozi bụ naanị PIECE nke mgbagwoju anya ahịa. Ọ bụrụ n’inweghị atụmatụ na ọdịnaya dị mma, mgbasa ozi mmekọrịta agaghị azọpụta azụmahịa gị.
Mgbasa mgbasa ozi na-emepụta ROI dara ogbenye mgbe 'oge' bụ ego.
Na usoro nke lekwasịrị-ahịa ziri ezi, ọ bụ naanị ubé mma karịa idobe kaadị azụmahịa si ụgbọelu.
Kpachara anya banyere itinye oge dị ukwuu na Twitter na Facebook. Ha nwere ike ịbụ ndị na-eri oge.
Kwesighi igbu oge buru ibu iji ruo ndị na-ege ntị.
Egbula onwe gị na mkpuchi. Social Media abụghị ụfọdụ onye anwansi nzọpụta maka azụmahịa gị. Ọ bụ naanị n'efu ma ọ bụrụ na oge gị abaghị uru ọ bụla na nke ahụ bụ akụ m kachasị oke ọnụ.
Itinye oge na nlebara anya na SM bara uru.
Ga-achọ otu nnomi nsonaazụ nyocha zuru ezu? Nwere ike ibudata ya ebe a:
Kedu ihe na-eme na saịtị gị ugbu a?
Aug 16, 2011 na 9: 30 AM
Mgbasa mgbasa ozi aghọwo otu n'ime ndị na-ewu ewu maka obere azụmahịa na ọtụtụ usoro SEO. Ugbu a, ọtụtụ ndị mmadụ na-ejikọ ibe ha na saịtị mmekọrịta ma kesaa echiche ha, echiche na nyocha ha ma ha nwekwara ike ịchọrọ na saịtị mmekọrịta. Yabụ site na ịmara mkpa ha, anyị nwere ike ịmụba azụmahịa site na saịtị mmekọrịta. N'ihi ya, ụzọ mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ ebe a na-ekwu maka azụmahịa yana maka ihe metụtara ọha na eze.
Aug 17, 2011 na 6:37 PM
Daalụ maka ikwu. Ị nwetere ya. Mgbasa mgbasa ozi na-arụ ọrụ dị mkpa na SEO, mana ọ bara uru maka uru ọ bara na mmekọrịta mmadụ.
Sep 8, 2011 na 5: 07 AM